Aogositra 10, 2018 Admin
WeChat fitsapana blockchain invoicing ho haingana ny orinasa refunds fandaniana
Teknolojia goavana Tencent fa eken'ny blockchain afaka hanafaingana ny fanonerana ny fandaniana ho an'ny mpiasa sy ny orinasa Izany dia midika hoe trialing ny endri-javatra eo amin'ny WeChat fampiharana hanao izany. Tencent dia ho namory ny fangatahana an-toerana tao amin'ny trano fisakafoanana any Shenzhen, Shina, izay ny mpampiasa nandoa ny volavolan-dalàna efa misy fandoavam-bola amin'ny alalan'ny fanompoana WeChat Pay.
Ny namahana ny fandoavam-bola tahirin-kevitra mpifehy ny blockchain sehatra ho an'ny mpampiasa ny mpampiasa, ny trano fisakafoanana ary ny eo an-toerana Shenzhen hetra fahefana, Tencent hoy fahatarana raha ny tokony ho nihaona tamin'ny alalan'ny boky milaza ny fitsipika dingana ireo intsony. indrindra, izany mampihena ny fielezan'ny nampivaona rosia izay somary mahazatra ao Shina ho fomba hetra. Tencent hoy ny fametrahana ny dingana famoahana amin'ny traceable blockchain, dia mety hanome ny hetra manam-pahefana amin'ny alalan'ny rafitra paperless hetra izay afaka manara-maso ny fivezivezen'ny vola miditra.
Singapore VC mafy nandefa $ 10m vita fanoloran-tena cryptocurrency tahirim-bola
Singaporeana barotra capital mafy Golden Gate Ventures dia fandefasana izay toa ho Azia Atsimo Atsinanana ny “VC vita fanoloran-tena voalohany cryptocurrency tahirim-bola” amin'ny $10 fampiasam-bola tapitrisa in-drenivohitra. Atao hoe LuneX Ventures, ny tahirim-bola dia hahita ny “tamin'ny laser-toy ny fifantohana” ny cryptocurrency & blockchain toerana amin'ny alalan'ny vola tamin'ny fiandohan'ny-dingana ao anatin'izany crypto startups fifanakalozana.
Nanorenana mpiara-miasa Kenrick hoy Drijkoningen "Tsy mihevitra blockchain ho toy ny fototra teknolojia, amin'ny feh miaraka, na mety indrindra ny Internet amin'ny disruptive mety. Amin'izao fotoana izao valuations efa nidina atỳ kokoa ambaratonga antonony sy ny orinasa dia mifindra avy amin'ny mpisava lalana tany am-boalohany adopters, izay lehibe fotoana hanombohana vola. "Beyond cryptocurrency fifanakalozana, ny petra-bola dia mikendry ihany koa ny vahaolana azo ampiharina startups hevitra, ny am-ponja & fiarovana fepetra takiana ao amin'ny sehatry crypto, ohatra "ny andrim-tolotra" ho lasibatra.
World Bank & Aostralia CommBank hamoaka blockchain voalohany fatorana
The World Bank Group no miara-miasa amin'ny Commonwealth an'i Aostralia Bank (CommBank) mba hamoaka ny fatorana nandritra ny blockchain. CommBank, iray amin'ny “Big 4” banky ara-barotra any Aostralia, nilaza fa nahazo didy avy amin'ny World Bank mba handamina ny famoahana ny fatorana, izay ho noforonina, nafindra ary niezaka ny blockchain alalan'ny sehatra.
ny teknolojia, efa novokarin'ny CommBank ny tao-trano blockchain laboratoara, mikendry ny manana antoko manan-danja ao amin'ny dingana famoahana fatorana toy ny mpampiasa vola sy ny banky mba ho fandraisana anjara amin'ny nozaraina nodes tambajotra. Capital ny fatorana azo atsangana sy dinihina mahomby kokoa. The World Bank voalaza fa namoaka $50 lavitrisa am-patorana isan-taona mba hampihenana ny fahantrana sy hanatsarana maharitra ho an'ny tsena maneran-tany. Denis Robitaille, CIO amin'ny Banky Iraisam-pirenena, nanao hoe: “Io no fatorana ny asan'ny mpisava lalana Tena Nanampy ny ezaka ataontsika mba hianatra ny fomba ahafahantsika manoro hevitra ny mpanjifa ao amin'ny firenena ny fotoana, ary hampidi-doza fa ny teknolojia disruptive manolotra rehefa miezaka hanatratra ny tanjona fampandrosoana maharitra.”
Cryptocurrency no mahaforona 5% ny US mampiasa vola ao 2019
Nentim-paharazana ny fampiasam-bola toy ny tena toetrany, boloky hazo sy ny fatorana governemanta dia mety mbola ho favoris mpampiasa vola eto amintsika, fa crypto tsy tokony hohamaivanina toy ny efa ho nahasarika betsaka mahaliana toy ny ETFs. Araka ny fanadihadiana nataon'ny The Harris Poll ho an'ny Amerikana Institute ny CPAs, teo anivon 'ny 35% ny Amerikana, izay mampiasa vola amin'izao fotoana izao, na dia mikasa ny hanao izany amin'ny 2019, cryptocurrencies dia dia maneho 5% ny fampiasam-bola Mix. Izany ampitahaina tsara amin'ny fifanakalozana-varotra tahirim-bola izay ahitana 8% ny Portfolios.
Araka ny fianarana ihany, akaiky 50% ny olon-dehibe eto amin'izao tontolo izao toe-karena lehibe indrindra kely ho tsy manam-pahalalana ny cryptocurrencies. Ny filohan'ny ny National CPA Financial mamaky Vaomieran'ny ny AICPA, Greg Anton, nanatitra torohevitra: "Fony tsy mbola vola ny Amerikanina mafy nahazo vola, dia zava-dehibe izy ireo mandray ny fifehezana ny ara-bola ho avy ka hanao fikarohana ... A Tena nanaovana fikarohana lalina sy araka ny tokony ho samihafa izay mifanandrify portfolio-ny mpampiasa vola mety fandeferana dia hanome fahatokian-hifantoka tamin'ny maharitra paik'ady sy hiarovana amin'ny fakam-panahy mba hivarotra mandritra short- Price teny nitaredretra. "
Graciela Mari hoy i:
Aogositra 28, 2018 amin'ny 1:54 PM